थाहा पाउनुहोस राशिअनुसार आफ्ना कमजोरी ! – Butwal Sandesh
थाहा पाउनुहोस राशिअनुसार आफ्ना कमजोरी !
ज्योतिषशास्त्रबाट मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानको फलादेश गरिन्छ । उसको जन्म समयलाई आधार मानेर जन्म कुण्डली तयार पारिन्छ । जन्म कुण्डलीमा बसेका ग्रहकोप्रभाव स्वरुप उसमा देखिने भूत, वर्तमान र भविष्यको फलादेश गरिन्छ । त्यसो त हरेक मानिसका राम्रा र कमजोर पक्षहरु हुन्छन् । कतिपय कुराहरुको विषयमा आफू जानकार नभएर पनि हामी असफलताको बाटोमा गईरहेका हुन सक्छौ ।
मेष राशिका मानिसहरु धेरै चाँडै रिसाउँछन्, जसको कारण मानिसहरुसंग उनीहरूको सम्बन्ध बि,ग्रन्छ । परिणाम स्वरूप यसले सफलताको बाटोबाट पछाडि धकेल्छ । त्यसैले मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो रीस नियन्त्रण गर्नुपर्ने शास्त्रले बताउँछ ।
वृष राशि भएका मानिसहरू अटेरी, घ*मण्डी, जि*द्दीपन स्वभावका हुन्छन् । यी राशि भएका मानिसहरुमा रिसालु स्वभाव पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले आफूमा हुने यी स्वभावमा परिवर्तन गर्ने हो भने वृष राशि भएका व्यक्तिले सफलता पाउनेछन् ।
मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू अरुलाई धेरै चाँडै विश्वास गर्दछन् । अरुको विवेकमा काम गर्दा प्राय उनीहरुले नोक्सान भोगिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको हातबाट धेरै राम्रा अवसरहरू समेत गु*मिरहेका हुन्छन् । तसर्थ यी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले कार्यसिसिद्धि पाउनेछन् ।
कन्या राशि भएका मानिसहरु स्वभावैले अ*हंकारी हुन्छन् । त्यसैले अरूलाई उनीहरु आफूभन्दा साधारण भन्ने ठान्छन् । तिनीहरूको यस्तै कार्यहरूले यिनीहरुको प्रगतिमा बाधा सिर्जना भइरहेको हुन्छ । कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अ*हंकार र अरूलाई तुच्छ ठान्ने प्रकृतिबाट टाढा बस्नु उपयुक्त हुनेछ ।
तुला राशि भएका व्यक्तिहरू सहयोगी भावनाका हुन्छन् । उनीहरु दिन दुखीहरुलाई मात्र नभएर आवश्यकता भन्दा बढी सहयोग गर्ने हुन्छन । यसले सधैँ सफलता हुन्छ भन्ने होइन । यस विषयमा पनि तुला राशि भएकाहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकी मानिसहरूले तपाईको कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । उदार प्रकृति स्वभाव देखेर मानिसहरुले यिनीहरुलाई धो*का नदेलान् भन्ने के छ र ?
वृश्चिक राशि भएका मानिसहरु हरेक कुरामा रि*साउने स्वभावका हुन्छन् । यो उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै रि*स हो । यही क्रो*धको कारण तिनीहरूलाई सफलताको मार्गमा अ*वरोध सिर्जना भइरहेको हुन्छ । वृश्चिक राशि भएकाहरुले आफ्नो रि*स र आ*वेगलाई नियन्त्रणमा राख्नु नै सवैभन्दा ठूलो बुद्धिमता हुनेछ ।
मकर राशिका मानिसहरुलाई लाग्दछ कि आफू नै सवै कुरामा निपूर्ण छु । तर, यो भ्र*म मात्र हो । यसले तपाईलाई नयाँ कुरा जान्ने र सिक्नेमा बाधा पुगिरहेको हुन्छ । यस्तो स्वभावलाई मकर राशिका मानिसहरुले परिवर्नत गर्न सके उसले सफलता हात पार्ने विश्वास गरिन्छ । तसर्थ अहमता त्यागेर अरुको कुरा सुन्ने र बुझ्ने गर्नु नै मकर राशिका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मीन राशि हुनेहरुमा आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ । जीवनमा केही गरौँ भन्ने हौशालाको कमी हुने हुँदा यिनीहरुको जीवनमा विभिन्न चु*नौतीहरु आइरहेका हुन्छन् । साना–तिना कुराहरु पनि उनीहरुलाई गम्भीर लाग्न सक्छन् । त्यसैले आत्मविश्वास बढाउनु नै मीन राशिका व्यक्तिहरुका लागि सफलता हुनेछ ।